China Automatic mbukota Machine factory na-emepụta | TUBO
Steel tube & Pipe Automatic mbukota Machine:
Akpaka stacking na Bundling Machine
Automatic mbukota igwe na-eji na-anakọta, tojupụtara ígwè anwụrụ n'ime 6 ma ọ bụ 4 akụkụ, na ùkwù-akpaghị aka. Ọ na-agba stably enweghị ntuziaka ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, kpochapụ mkpọtụ na ịkụ aka nke ujo nke ọkpọkọ nchara. Anyị mbukota akara nwere ike melite gị ọkpọkọ àgwà na mmepụta arụmọrụ, belata na-eri, nakwa dị ka kpochapụ nwere nchekwa odachi.
1. stacking na mbukota akpaghị aka.
2.Perfect nke elu tube.
3.Less ọrụ, Lower-arụ ọrụ ike.
4.Automatic ọrụ, ala oké ụzụ.
A na-ebuga ọkpọkọ ahụ na ebe a na-akwakọba ihe site na tebụl na-apụ apụ:
1.Pipes mbịne mbukota igwe
A ga-atụgharị ọkpọkọ na ngwaọrụ ndị na-ebugharị igwe eletriki site na ọkpọkọ na-atụgharị ngwaọrụ wee kwaga ebe a na-agụta ọkpọkọ;
2.Pipe agụta na stacking
Usoro a nwere usoro ihe eji eme ya nke ga-adị ọtụtụ iberibe ọkpọkọ ga-adị mkpa na otu ụzọ maka nha dịgasị iche iche, usoro ahụ ga-eziga usoro na igwe na-agụta ma na-agbakọta akwa ọkpọkọ site na oyi akwa ruo mgbe a ga-achịkọta ọkpọkọ zuru ezu device ngwaọrụ nnakọta anwụrụ ga-aga gbadata elu nke otu oyi akwa mgbe a na-achịkọta otu ọkpọkọ ma kpụga ya na ngwaọrụ nnakọta ； nwekwara otu nghazi ngwụcha na njedebe otu;
A ga-ebugharị ngwungwu niile nke ọkpọkọ ahụ site na ụgbọ njem, mgbe ahụ, ngwaọrụ nchịkọta ga-alaghachi na ọnọdụ nchịkọta na-echere ngwugwu ọhụrụ;
4.Automatic bundling ngwaọrụ
Ihe nkedo akpaka bundling ngwaọrụ ga-arụ ọrụ dị ka set bundling belt ọnọdụ chọrọ nzọụkwụ site nzọụkwụ; ọganihu bụ: igwe nchikota ga-agbada na ọnọdụ ọnụ ma kpọtụrụ ọkpọkọ elu nke ọkpọkọ, ọwa na-eduzi eriri ga-emechi, isi na-agagharịzi ga-ezipụ eriri ahụ, na-ejikọ eriri belt ahụ, na-emechi eriri ahụ, na-agbanye bya egbushia ẹphe; mgbe nke ahụ gasịrị, eriri na-eduzi eriri ahụ ga-emeghe, isi na-agbakọta ga-alaghachi n'ọnọdụ mbụ ma na-akwadebe nchịkọta ọzọ;
A ga-ebuga paịpụ ndị ahụ agbakọtara na ọnọdụ nchekwa site na ngwaọrụ ịchekwa agbụ ígwè, ụgbọ njem na-ebugharị ma na-eche ngwugwu ọzọ;
Ebe a na-echekwa ga-echekwa ngwungwu atọ ma kwaga na kreenu agwụla ebe ahụ;
Gba ígwè: dum usoro a ga-achịkwa site na ulo oru PLC na-akpaghị aka, na-nwere ọrụ nke ntuziaka na akpaka akara na-ekwe nkwa na-aga n'ihu mmepụta na-arụ ọrụ anwụ ngwa ngwa;
Nke gara aga: ERW 219mm tube Mill
Osote: ERW 32mm tube Mill
Automatic Pipe mbukota Machine
Automatic Steel Pipe mbukota Machine
Automatic tube mbukota Machine
Full Automatic Steel Pipe mbukota Machine